Nay Nyo Chan: Lesson - 1 - Family
You can useafamily tree to diagram the relationships among your family members.
ခင်များရဲ့ family members မိသားစုဝင်များကြား ဆွေးမျိုးဆက်တွေကို ရေးဆွဲပုံဖော်ဖို့ ဆွေးမျိုးဆက် ဇယား family tree ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
A person who is related to you byalong series of connections can be calledadistant relative.
ဆွေးစဉ်မျိုးဆက်တစ်လျောက် ခင်းများနဲ့ ဆွေမျိုးတော်စပ်လာတဲ့သူကို distant relative လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
If you’re lucky, you havealoving family oraclose-knit family – these expressions refer toafamily that has good relationships, where everyone loves each other and helps each other.
ခင်များကံကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့မိသားစု loving family ဒါမှမဟုတ် စည်းစည်းလုံးလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်တဲ့ မိသားစု close-knit family ခင်များမှာ ရတာ တဲ့။ loving family, close-knit family ဆိုတဲ့ ဖော်ပြချက်တွေဟာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦး ချစ်ချစ်ခင်ခင် ကူကူညီညီ ရှိတဲ့ ဆံဆက်ကောင်းမွန်တဲ့ မိသားစုကို ရည်ညွှန်းတာပါ။
If you were raised inaloving family, then you probably hadacarefree childhood – that means you had nothing to worry about when you were young.
ချစ်ခင်စရာကောင်းတဲ့မိသားစုမှာ ခင်များ ကြီးပြင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ခင်များမှာ အပူအပင်းကင်းတဲ့ ကလေးဘ၀ carefree childhood ကို ရခဲ့တာပေါ့။ ဆိုလိုတာက ခင်များငယ်စဉ်တောင်ကျေး ကလေးဘ၀တုန်းက ပူပင်စရာဆိုလို့ ဘာမှကို မရှိခဲ့ဘူးလို့ ပြောတာပါ။
On the other hand,afamily in which the relationships are bad or unhealthy can be calledadysfunctional family.
ဒါပေမယ့် ဆက်ဆံရေးတွေ စိုစိုပြေပြေမရှိ၊ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးဖရိုဖရဲဖြစ်နေတဲ့မိသားစုကို ဖရိုဖရဲပြိုကွဲနေတဲ့ မိသားစု dysfunctional family လို့ ခေါ်နိုင်ပါတယ်။
If the children experience abuse, poverty, or problems with the law, we can say
they hadatroubled childhood.
ကလေးငယ်တွေ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှု ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပြဿနာများ ဥပဒနှင့် ကြုံတွေ့ခံစားရတယ် ဆိုရင် ပြဿနာများတဲ့ကလေးဘ၀ troubled childhood ကို သူတို့ ရခဲ့တာလို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။
Perhaps the parents went throughabitter divorce – that meansaseparation in which there were bad/angry feelings between the husband and wife.
မိဘတွေ ခါးခါးသီးသီး အိမ်ထောင်ရေး တရားဝင်ကွာရှင်းမှုတွေ bitter divorce လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါပဲ။ ဆိုလိုတာက ဇနီးသည်နှင့်ယောင်္ကျားအကြား ဒေါသစိတ်တွေ၊ အဆင်မပြေတဲ့ ခံစားချက်တွေ ရှိလာတာကြောင့် ကွာရှင်းလိုက်တဲ့ ကွာရှင်းမှုပေါ့။
It’s also possible to haveamessy divorce, withaprolonged legal battle involving lots of conflicts about the separation of the former couple’s assets (money and possessions).
အိမ်ထောင်ဟောင်းရဲ ပိုင်ဆိုင်မှုများ (ငွေရေးကြေးရေးနှင့် ပစ္စည်းပစ္စယများ) ခွဲရေး ချမ်းရေးနှင့် ပက်သတ်တဲ့ ပဋိပက္ခတွေများတဲ့ ရှည်လျှားတဲ့ တရားဝင် ရင်ဆိုင်မှုနှင့်အတူ ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဇာတ်ရှုပ်တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကွာရှင်းမှု messy divorce လည်း ရှိနိုင်ပါတယ်။
The decisions about the separation of assets are made in the divorce settlement.
ပိုင်ဆိုင်မှုများ ခွဲရေး ချမ်းရေးနှင့် ပက်သတ်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတော့ တရားဝင်ကွာရှင်းမှု တရားဝင်ပေး အပ်ရသည့် ဥစ္စာကြေးငွေရေးရာ divorce settlement မှာ ပြုလုပ်ရပါတယ်။
တရားဝင်အိမ်ထောင်ရေးကွားရှင်မှုတွေ၊ ပျက်စဲမှုတွေ ရှိတဲ့ မိသားစုကို ပြိုကွဲနေတဲ့ မိသားစု ပြိုကွဲနေတဲ့ အိမ် broken home လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Sometimes the mother and father fight over custody of the children – that refers to who has the primary responsibility of caring for the kids.
တစ်ခါတရံမှာတော့ အဖေဖြစ်တဲ့သူနဲ့ အမေဖြစ်တဲ့သူတို့ဟာ ကလေးတွေကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် မှု custody of the children အပေါ် စကားများကြပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေကို ဂရုစိုက်မှုအတွက် အဓိကတာဝန်ရှိတဲ့သူကို ရည်ညွှန်းတာပါ။
A judge can grant joint custody – that means the ex-husband and ex-wife share the responsibility – or sole custody to only one parent.
တရားသူကြီးက နှစ်ဦးအတူ ညီတူ မျှတ စောင့်ရှောက်ခွင့် ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက မိခင်ဟောင်းနှင့် ယောင်္ကျားဟောင်းတို့ဟာ တာဝန်ကို မျှယူကြတာပါ။ ဒါမှမဟုတ် မိဘ တစ်ဦးတည်းကိုပဲ တစ်ဦးတည်း ထိန်းသိမ်းစောက်ရှောက်ခွင့် sole custody ပေးနိုင်ပါတယ်။
For example,ajudge might award sole custody to the mother, and the father has to pay child support – regular payments to help with expenses for the kids.
ဥပမာအနေနဲ့ကတော့ တရားသူကြီးက မိခင်ကို တစ်ဦးတည်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခွင့် ပေးလိုက်တယ် award sole custody ဆိုပါတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက ကလေးအတွက် ထောက်ပံ့ကြေးငွေ ပေးရ pay child support မှာပါ။ ကလေးတွေအတွက် အသုံးစရိတ် ချောင်လည်စေဖို့ ပုံမှန်ထောက်ပံ့ပေးမှုပေါ့။
နှစ်ဦးသဘောတူ တရားဝင်အိမ်ထောင်ကွားရှင်းတာ ပျက်စဲတယ် mutual divorce/ separation ဆိုတာ ယောင်္ကျားဟောင်းနှင့် ဇနီးဟောင်းတို့ဟာ စကားမများ ရန်မဖြစ်ဘဲ သဘောတူ ကွာရှင်းတာပါ။ အဲဒီလိုဆိုရင်တော့ သူတို့ဟာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ဆက်ဆံရေး ကောင်းမွန်ပြေပြစ်စွာ on good terms with each other နေထိုင်ကြမှာပါ။ (ပဋိပက္ခတွေမဖြစ်တော့ဘဲ ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိတာကို ဆိုလိုခြင်းပါ)
Ifawoman gets pregnant without being married or inarelationship, then she will becomeasingle mother.
မိန်းမသားတစ်ယောက် အိမ်ထောင်မပြုဘဲ ဒါမှမဟုတ် ချစ်တုန်းကြိုက်တုန်း သံယောဇဉ်တွယ်နေချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ရတယ် gets pregnant ဆိုရင် အဲဒီ မိန်းမသားဟာ အိမ်ထောင်မပြုဘဲ ကလေးရတဲ့ မိခင် single mother ဖြစ်လာမှာပါ။
Some women in this situation choose to have an abortion, and others prefer to give the baby up for adoption.
ဒီလိုမျိုး အခြေအနေရောက်လာရင် တစ်ချို့ မိန်းမသားတွေကြတော့ ကိုယ်ဝန်ဖျက် have an abortion ဖို့ရွေးကြတယ်။ တစ်ချို့မိန်းမသားတွေကြတော့ ကလေးကို အပြီးအပိုင် မွေးစား give the baby up for adoption ဖို့ ပေးလိုက်ကြတယ်။
The time when the baby is planned to arrive is called the due date – you can also say
the baby is due in mid-October, for example.
ကလေးငယ် မွေးဖွားလာဖို့ စီစဉ်ချိန်ဆထားတဲ့ အချိန်ကို ဖွားရက် မွေးဖွားရက် due date လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ကလေးငယ် အောက်တိုဘာလလယ်မှာ ဖွားမယ်လို့ ဥပမာအနေနဲ့ပြောနိုင်ပါတယ်။
After the woman has the baby (or gives birth to the baby), the baby is given to the adoptive parents, who will raise the child or bring up the child as if it was their own.
အမျိုးသမိး ကလေးဖွား has the baby (or gives birth to the baby) ပြီးတဲ့နောက်မှာ ကလေးငယ်ကို မွေးစားမိဘတွေဆီ ပေးလိုက်ပါတယ်။ မွေးစား မိဘတွေက adoptive parents ကလေးငယ်ကို သူတို့ရဲ့ သား သမီးအရင်းသဖွယ် ကျွေးမွေး ပြုစု ကြည့်ရှု ပျိုးထောင် raise the child or bring up the baby ကြမှာပါ။
Sometimes, when the adopted child is older, he or she tries to find their birth mother (biological mother).
တစ်ခါတရံမှာတော့ မွေးစားကလေး adopted child အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ယောင်္ကျားပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ရဲ့ မွေးမိခင် birth mother ကို တွေ့ဖို့ကြိုးပမ်းကြတယ်။
အထက်ပါ ဥပမာဝါကျတွေနဲ့ မိတ်ဖက်တွဲလုံး collocations တွေကို အသေအချာလေ့လာပါ။
ပြီးတဲ့အခါ နောက်ဆုံးမှာပေးထားတဲ့ ၀ါကျတွေထဲက မှန်ကန်တဲ့ တွဲလုံးတွေ တွဲပေးပါ။
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူများ အားလုံး collocations များ များများလေ့လာ မှတ်သားနိုင်ကြပါစေ။
အင်္ဂလိပ်စာကိုလည်း ဝေေ၀ဆာဆာလှလှပပ ရေးသား ပြောဆိုနိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်း ဒီတစ်ပတ် ဒီလောက်နဲ့ပဲ နားပါရစေ။
၂၄၊ ၄၊ ၂၀၁၆။
immediate family = (မိဘ၊ ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မများပါဝင်သော) မိသားစု
extended family = (၀မ်းကွဲ ညီအစ်ကိုမောင်နှစ်မ၊ ဦးလေး၊ ကြီးတော်တို့ ပါဝင်သော) မိသားစု
family tree = ဆွေမျိုးဆက်ဇယား
family members = မိသားစုဝင်များ
distant relative = (နှစ်ဝမ်းကွဲ၊ သုံးဝမ်းကွဲ စသည် တော်စပ်သည့်) ဆွေမျိုး
loving family = ချစ်စရာကောင်းသော မိသားစု
close-knit family = စည်းစည်းလုံးလုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်တဲ့ မိသားစု
carefree childhood = အပူအပင်ကင်းသော ကလေးဘ၀
dysfunctional family = ဖရိုဖရဲဖြစ်နေသော မိသားစု
troubled childhood = ပြဿနာများတဲ့ ကလေးဘ၀
bitter divorce = ခါးသီးသော အိမ်ထောင်ရေးကွာရှင်းမှု
messy divorce = ရှုပ်ထွေးသော၊ ဇာတ်ရှုပ်သော အိမ်ထောင်ရေးကွာရှင်းမှု
divorce settlement = (အိမ်ထောင်ကွာရှင်းမှုတွင် တရားဝင်ပေးအပ်သည့်၊ ပေးအပ်ရသည့်) ဥစ္စာကြေးငွေ
broken home = ပြိုကွဲနေသော အိမ်
custody of the children = ကလေးထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခွင့်
grant joint custody = မျှတူ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခွင့်
sole custody = တစ်ဦးတည်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခွင့်
award sole custody = တစ်ဦးတည်း ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခွင့် ပေးအပ်သည်
pay child support = ကလေး အတွက် ထောက်ပံ့ကျေးငွေ ပေးသည်
mutual divorce / separation = နှစ်ဦးသဘောတူ ကွဲကွာခြင်း
on good terms with each other = တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်ဆံရေးကောင်းစွာ/ ပြေပြစ်စွာ
get pregnant = ကိုယ်ဝန်ရသည်
single mother = အိမ်ထောင်မပြုဘဲ ကလေးရသည့် မိခင်
have an abortion = ကိုယ်ဝန်ဖျက်သည်
give the baby up for adoption = ကလေးကို အပြီးအပိုင်မွေးစားဖို့ ပေးသည်
due date = ဖွား၊ မွေးရက်
The baby is due in mid-October. အောက်တိုဘာ လလယ်မှာ ကလေးမွေးမည်။
has the baby / gives birth to the baby = ကလေးမွေးသည်
adoptive parents = မွေးစား မိဘ
raise the child / bring up the child = ကလေးကို ကျွေးမွေး ပြုစု ကြည့်ရှု့စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းသည်
adopted child = မွေးစားသား၊ သမီး
birth mother / biological mother = မွေးမိခင်
Posted by Nay Nyo Chan at 4:19 AM